कर्णाली प्रदेश घुम्न जाने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ ? - ParyatanBazar.com
कर्णाली प्रदेश घुम्न जाने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ ?
पर्यटन बजार२० बैशाख २०७६, शुक्रबार मा प्रकाशित
बैशाख २०,काठमाडौं । के तपाई कर्णाली प्रदेश घुम्न जाने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने कहाँ कहाँ घुम्ने यसको बारेमा तपाइले जान्नु अत्यन्तै आवश्यक रहेको छ । तपाईहरुकै सहजताको लागि हामीले केहि महत्वपूर्ण घुम्नै पर्ने स्थानको सुची बनाएका छौं ।
कर्णाली प्रदेशको प्रमूख पर्यटकीय गन्तव्य हो मुगुको रारा ताल । यो ताल नेपालको सबैभन्दा ठूलो र गहिरो ताल हो । महेन्द्र दहको नामले चिनिएको यो ताल समुद्र सतहबाट २९९० मीटरको उचाईमा रहेको छ भने १० वर्ग कि मी क्षेक्रलमा फैलिएको छ । यसको गहिराई १७६ मीटर रहेको छ । रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको बिच भागमा रहेको यस तालको अवलोकन गर्न वर्षेनि हजारौँ आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक जाने गर्दछन । रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ५१ प्रजातिका स्तनधारी र २१४ प्रजातिका चराहरु पाईन्छन् । यस बाहेक हिउदको समयमा छिमेकी मुलुक चीन देखी अन्य प्रजातिका चराहर बसाई सरेर आउने र वर्षा लागेपछि चिन तर्फ जाने गर्दछन । रारा ताल भ्रमण गर्न जाने उपयुक्त समय चैत्र देखि जेठ र भदौ देखि मंसिर सम्मको समय उपयुक्त हुन्छ । यस ठाउँमा जानको लागि काठमाडौँ बाट गाडिमा सुर्खेत हुदै मुगु पुग्न सकिन्छ भने काठमाडौँबाट सुर्खेत र नेपालगञ्ज सम्म हवाई को यात्रा तथा नेपालगञ्ज र सुर्खेत बाट पुन हवाई यात्रा गरे पछि मुगुको रारा पुग्न सकिन्छ ।
सुर्खेत जिल्लाको प्रमूख पर्यटकीय स्थल हो काक्रेविहार । कर्णाली प्रदेशको राजधानी विरेनद्रनगर सुर्खेतमा रहेको काक्रेबिहार प्रदेशकै एक पर्यटनको धरोहरको रुपमा रहेको छ । ऐतिहासिक कला कृतिले सजिएको काक्रेबिहार पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बनेको छ । वरिपरि वनजंगल विचमा पौराणिक कालमा देवि देवताले निर्माण गरेका कलाकृतिले सजिएको काक्रेबिहार लुम्विनी पछिको दोस्रो पर्यटकीय क्षेत्र हो । विरेन्द्र नगरको मंगलगढी चोक बाट ३ किलोमिटको दुरिमा रहेको काक्रेविहार पैदल तथा गाडि बाट सहजै जान सकिन्छ ।
डोल्पाको शे फोक्सुण्डो ताल
कर्णाली प्रदेको अर्को महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य हो डोल्पा जिल्लामा रहेको शे फोक्सुण्डो ताल । कान्जिरोवा हिमालको काखैमा रहेको शे फोक्सुण्डो ताल सफा, स्वच्छ, सुन्दर शान्त र निर्मल पानी तथा प्राकृतिक अलौकिक उपहार हो । हेर्दामा निकै राम्रो ताल छिनछिनमा आफ्नो रुप बदल्ने गर्दछ । तालको पानी देखेर त्यहाँ पुग्ने जोकोही को मन मोहित हुन्छ । भौगोलिक विकटता भए पनि प्राकृतिक सुनदरता जैविक विविधताले गर्दा यस तालले पर्यटककलाई आफूतिर आर्कषित गरिरहेको छ । समुद्री सतहबाट ३ हजार ९ सय ९० मिटरको उचाई तथा ६ सय ५० मिटर गहिरो रहेको यो ताल नेपालकै गहिरो तालको रुपमा चिनिएको छ । यसका अलवा यस ठाउँमा पर्यटककलाई थप आकर्षित गर्ने पर्यटकीय स्थलहरु शे फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, त्रिपुरासुन्दरी भगवतीको मन्दिर र शे गुम्बा हुन । यो ठाउँ विशेष रुपमा पदयात्रामा रमाउनेका लागि उपयुक्त छ । यस ठाउँमा जानको लागि यातायात तथा नेपालगन्जबाट हवाई सेवा प्रयोग गरेर जान सकिन्छ ।
सल्यानको कुपिण्डे दह
कर्णाली प्रदेशको मिनी राराको नामले चिनिएको सल्यानको कुपिण्डे दह पर्यटनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो । सल्यानको सेजुवाल टाकुरा, मार्के, माझकाँडा, धाजी पीपलर कजेरी को बिचमा रहेको कुपिण्डे दह प्राकृतिक रुपले भरिपूर्ण छ । वरिपरि हरीयाली रुख विरुवा, ग्रामिणा वस्ती ले यस तालमा पुग्ने जोकोहिको पनि मन लोभ्याउछ । कुपिण्डे दहको वरिपरी स्वच्छ वातावरण उत्तरतिर देखिने हिमशृङखला वरीपरि पहाड र जंगलको विचमा रहेको निलो आकाश झै फैलिएको सुन्दर तालले सबैलाई आकर्षित गरेको छ । वर्षमा तिन पटक फरक फरक रंग बदल्ने यो तालको विशेषता हो । ११ सय २० मिटरको उचाईमा रहेको यो ताल ३४ मिटर गहिरो रहेको छ । यस तालमा पुग्नको लागि सदरमुकाम खंलगाबाट एक घण्टाको बस यात्रा पछि पुग्न सकिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशको नजिकको पर्यटकीय स्थल हो बुलबुले ताल । यो ताल सानो छ तर यहाँ वरिपरि गार्डेन ले यस क्षेत्रमा घुम्न जाने जो कोहिको मनि मन लोभिन्छ । जमिनमुनिबाट बुल्बुल गदै निष्किएको पानी बाट बनेको यो तालमा पुग्नेहरुलाई मोहित गराउँछ । यहाँ नुहाउनको लागि पुरुष र महिलाका लागि छुट्टा छुट्टै धाराहरु बनाईएको छ । लगभग समुन्द्र सतहदेखि ६५७ मिटरको उचाईमा रहेको बुलबुले ताल पैदत तथा गाडिमा जान सकिन्छ ।
कालिकोटको पचाल झरना
कर्णाली प्रदेशको घुम्नै पर्ने पर्यटकीय स्थल हो कालिकोटको पचाल झरना । यो झरना नेपालकै अग्लो झरना हो । झरनामा रम्नेको लागि यो उपयुक्त पर्यटकीय स्थल हो । यस ठाउँमा जानेको लागि सुर्खेत, दैलेख हुदै जान सडक यातायत हुदै जान सकिन्छ । यो झरना विशेष रुपमा वर्खाको समयमा राम्रो देखिन्छ । हरियालि तथा मुलहरु फुटी पानी बढ्ने भएकाले वर्खामा राम्रो देखिन्छ । यति रारा ताल जादै हुनुहुन्छ भने एक पटक यो झराना पनि हेरेर जान सक्नुहुने छ ।
भेरी कर्णालीको संगम स्थल दोभान
पञ्चपुरी नगरपालिका र चौकुने गाँउपालिकाको सिमानामा रहेको भेरी कर्णालीको संगम स्थल दोभान कर्णाली प्रदेशको उत्कृष्ट पर्यटकीय स्थल हो । यो तिर्थ पर्यटन पनि हो । धार्मिक आस्थाको केन्द्रविन्दुको रुपमा रहेको दोभानमा पृत मोक्षका लागि दान गरि जल अर्पण र डुबल्की मार्दै मृत आत्माको शान्तिको कामना गर्ने गरिन्छ । धार्मिक मान्यता अनुसार दोभानमा गई डुबुल्की मार्दा सबै पाप नष्ट हुने परम्परागत सोचाई अनुरुप पुर्णीमा , औंसिमा , मागे संक्रातीमा दोभानमा गई डुबूल्की मार्ने गर्दछन् । यस ठाउँमा पुग्न कर्णाली पुलदेखि १४ कि.मी तथा ाजधानी विरेन्द्रनगर वजार देखि १७ कोषको दुरिमा रहेको छ ।
जाजरकोटको मालिका गुफा
पर्यटकीय दृष्टिकोणाले जाजरकोटको मालिका गुुफा एक गन्तव्य हो । यसका साथै चौविसे राज्यहरु भएको जाजरकोट दरबार ऐतिहासिक सम्पादाको रुपमा रहेको छ । जाजरकोटको सदरमुकाम खलंगामा रहेको जाजरकोट दरबार करिव ३ सय वर्ष पहिले बनेको स्थानिय बुढापाखा बताउछन् । सात तलाको दरबार ९० सालको भूकम्पले भत्काएपछि अहिले ३ तलाको मात्र छ । ऐतिहासिक रुपमा रहेको दरबार अध्ययन तथा अवलोकन गर्नेको लागि उपयुक्त छ ।
कर्णाली प्रदेशको घुम्नै पर्ने अर्को पर्यटकीय स्थल हो दैलेखको पंञ्चकोशी क्षेत्र मध्येको ज्वाला । दैलेखमा पर्यटकीय स्थलहरु धेरै नै छन् तर पर्यटकको लागि प्रमूख गन्तव्य अनवरत रुपले बलिरहेको ज्वाला क्षेत्र । पंञ्चकोशी तिर्थस्थल अन्तर्गत शिरस्थान, नाभिस्थान, कोटीला, धुलेश्वर र पादुका गरी जम्मा पाँच तिर्थ स्थलहरु हुन तर पर्यटनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त्त स्थल ज्वाला हो । यस ठाउँमा जानको लागि दैलेख सदरमुकामबाट गाडि चढेर जान सकिन्छ ।